Lisitra feno amin'ny smartwatches izay manavao ny Android Oreo | Androidsis
Ity herinandro ity ihany Android Oreo dia nanambara fa ho avy amin'ny rindrambaiko Android Wear 2. Fanavaozana izany mamela fanatsarana maromaro. Saingy, tsy fantatra izay famantaranandro na hoe rahoviana no ho tonga ity fanavaozana ity. Soa ihany, efa manana fampahalalana bebe kokoa isika afaka andro vitsivitsy.
Rehefa afaka andro vitsivitsy niandrasana, Google dia nanambara ny lisitr'ireo smartwatches feno izay hahazo ny fanavaozana ny Android Oreo. Ka efa fantatsika hoe iza ireo tsara vintana. Te hahafantatra ve ianao raha ao anaty lisitra ny famantaranandronao? Holazainay aminao bebe kokoa etsy ambany!
Ny orinasa dia efa namoaka ny lisitra tamin'ny famantaranandro efa nanavao na afaka manavao ny Android Oreo. Ho fanampin'ireo fitaovana izay ho afaka hanao izany tsy ho ela. Na dia, hatreto aza ireo daty niarahan'ireo fitaovana ireo Android Wear 2 afaka manavao izy ireo. Amin'ny ampahany lehibe satria miankina amin'ny mpanamboatra azy io. Ka amin'ity lafiny ity dia tsy maintsy miandry isika.
avy eo avelanay miaraka aminao ny lisitra feno, zarao ireo izay efa misy ny fanavaozana Android Oreo sy ireo mbola tsy nahazo.
1 Smartwatches izay afaka manavao ny Android Oreo
2 Smartwatches izay azo havaozina
Smartwatches izay afaka manavao ny Android Oreo
Smartwatches izay azo havaozina
Amin'izao fotoana izao efa fantatsika ireo famantaranandro miaraka amin'ny Android Wear 2 izay hanavao ny Android Oreo. Ny mbola tsy fantatsika dia ny daty hitranga izany. Ka manantena izahay fa handre bebe kokoa momba izany tsy ho ela. Ao amin'ny lisitr'ireo hanavao anao ve ny smartwatch anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Google dia manamafy ny fizotran-tsaina izay hanavao ny Android Oreo